Akhriso: Hindise Sahrciyeedka Maareynta Maaliyadda ee Golaha Shacabka Horyaalla
Xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa September 23-keedii waxaa ay golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya hor-keentay hindise sharciyeedyo 15 ah uu ku jiro “Hindise Sharciyeedka Maareynta Maaliyadda”. Waxaana waqti-xaadirkan uu ku jiraa aqris, waxaa la filayaa in ay ka doodaan dhowaan. Hadaba Goobjoog Business waxaa ay halkan idin kugu soo gudbineysaa nuxurka Hindise Sharciyeedka Maaliyadda.
Qodobka 1aad: Magaca, Ujeedka & Baaxadda
Sharcigaan waxaa lagu magacaabaa ‘Sharciga Maareynta Maaliyadda ee sanadka 2017-ka’. Ujeedka sharcigan waa in uu maamulo dhammaan arrimaha la xiriira maaliyadda guud ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya isagoona dajinaya mabaadi’da aasaasiga ah iyo habraaci diyaarinta, ansixinta miisaaniyadda Qaranka.
Waxaa kale oo uu sharcigan dejinayaa habraaca kormeerka gudaha, xisaabaadka, warbixinnada iyo dabagalka dakhliga, kharajka, raasumaalka iyo deymaha, sidoo kale mareynta deynta guud iyo damaanadaha xukuumadda.
Yaa Lagu Dhaqayaa Sharcigan?
Waxaa qodobada sharcigan lagu dhaqayaa Hay’adaha Dowladda iyo Shirkadaha Dowladdu leedahay. Waxaa kale oo qodobada sharcigan lagu dhaqayaa Dowlad goboleedyada Qaranka.
Qodobka 4aad: Khasnadda Mideysan ee Qaranka
Qodobka 4’aad qeybtiisa 2aad, waxaa uu waajib ka dhigayaan in dhammaan dakhliga Dowladda Federaalka ah lagu aruursho laguna baxsho Khasnadda Mideysan ee Qaranka laguna daro Xeerka Qoondada Miisaaniyadda Qaranka.
Yaa Iskaleh Awoodda Canshuur Dhaafka?
Wasiirka kaliya ayaa iskaleh awoodda canshuur dhaaf ee loo sameynayo canshuur dhaaf walba oo ee sharciga ogol yahay ee qiimaha loo dhaafi karo sida u qabo sharciga, ayuu leeyahay qodobka 5aad qeybtiisa 1aad.
Wasiirka ayaa looga baahanyahay in uu Diiwaaanka Dowladda ku diiwaangeshado canshuur dhaafka isagoo raacinaya sababta loo sameeyay canshuur dhaafka waxaana lagu soo daabici doonaa Joornaalka Dowladda.
Wasiirka waxaa looga baahanyahay in uu canshuur dhaaf walba oo la sameeyo uu u gudbiyo Golaha Shacabka Federaalka muddooyinka kala ah 30-ka Maarso, 30-ka Juun, 30-ka September iyo 31-da December oo macnaheedu tahay in uu soo gudbinayo inta lagu guda-jiro Sannad xisaabeedka.
Qodobka 6aad: Mabda’a & Xiriirka Dowlad Goboleedyada
Qodobka 6aad faqradiisa 1aad waxuu dhigayaa in dowladda goboleedka ay tahay in uu xiriir maaliyadeed la leeyahay Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Dowlad Goboleedyada kale si loo hormariyo wada-shaqeynta. Waxaa kale oo uu qodobkaas sheegayaa in ay la wadaagaan Miisaaniyadda iyo xogaha kale ee Maaliyadda Dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleedyada kale ee dalka.
Marka Ladiyaarinayo Miisaaniyadda Qaranka, Wasiirka ayaa wareegto kusoo saarayo oo uu kaga hadlayo Maamul Goboleedyada in ay soo gudbiyaan xogaha Miisaaniyadda, Qorshahooda Miisaaniyadeed, Xogta Xisaabaadkooda sida ku cad warqadda dalabka.
Qodobka 7aad: Awoodaha & Masuuliyadda Golaha Shacabka
Faqrada 1aad, Golaha Shacabka ayaa masuul ka ah ansixinta Sharciga Miisaaniyadda Qaranka, iyo ansixinta Miisaaniyadda dheeriga ah inta lagu guda jiro sannad Maaliyadeedka iyo xeerarka kale ee kamidka ah fulinta miisaaniyadda Qaranka ay ku jiraan Deymaha iyo Deeqaha Dowladda.
Faqrada 2aad, Golaha Shacabka ayaa leh awoodda inuu dib u eego soo jeedinta Miisaniyadda ayagoon wax ka badaleyn dheerlitirka Dhakhliga iyo Qarashka.
Faqrada 3aad, Golaha Shacabka Fedraalka waxuu ka dalbi karaa xubnaha wasiiradda iyo shaqaalahooda farsamo in ay hor yimaadaan si ay u sharaxaan siyaadada, mashaariicda, iyo isticmaalka Miisaaniyaddooda.
Qododbka 8aad: Awoodaha & Waajibaadka Wasiirka
Faqrada 1aad: Wasiirka ayaa masuul ka ah dhammaan siyaasadaha iyo xaaladaha farsamo ee la xiriirta habsami u socodka Nidaamka Maaliyadda Dowladda iyo taabagelinta dhammaan agabyadda iyo documentiyada uu dalbay sharcigan iyo waqtiga uu cayimay.
Farqada 2aad, Wasiirka ayaa masuul ka ah maamulka lacagta dowladda iyo Khasnadda Mideysan ee Qaranka. Sidaa kalena Wasiirka ayaa ilaalinaya diiwaan haboon ee xisaabaha soo xarooda, lacag bixinta iyo dheeliga Khasnadda Mideysan ee Qaranka.
Faqrada 3aad, Mas’uuliyadda gaarka ah ee Wasiirka waxaa kamid ah diyaarinta iyo fulinta habka wada-shaqeynta miisaaniyadda Qaranka ee xilliga dhexe, Miisaaniyadda Qaranka, diyaarinta iyo faafinta xisaab-xerka iyo xogaha kale ee ku saabsan Miisaaniyadda Qaranka iyo maamulka hantida dowladda Federaalka, Deymaha Dowladda, Deeqaha, damaanadaha dowladda iyo qaamaha kale sida ku cad xeerka.
Faqrada 4aad, si waafaqsan waajibaadka uu u igmaday Raisul Wasaaraha, Wasiirka waa in uu hormariyaa sidoo kalena fuliyo dhaqaalaha sare iyo saiyaasadda miisaaniyadda guud ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Faqrada 5aad, Wasiirka ayaa xaqiijinaya toosnaanta iyo tayada maamulka Maaliyadda dowladda, iyo xaqa, sinaanta, tartanka iyo hufnaanta Kharajka ee iibka dowladda.
Faqrada 6aad, Si waafaqsan sharciyada Dowladda Fedraalka Soomaaliya, Wasiirka waxuu aasaasi karaa, isagoo haysta ansixinta Golaha Wasiirada, Qaab dhismeedyada, iyo waaxaha ka jira Wasaaradda dhexdeed iyadooo la fulinayo sharuudaha sharcigan si dhameystiran daaha looga qaado howlaha halkan ku xusan.
Qodobka 10aad: Xisaaabiyaha Guud
Waxaa ka mid ah Mas’uuliyadaha gaar ahaaneed ee Xisaabiyaha Guud:
In uu maamulo xisaabaadka Miisaaniyadda Qaranka iyo ilaaliyo xisaabaadka hay’ad walba ee hay’ad kasta ee guud.
In uu sii daayo lacagaha ka yimid Khasnadda Mideysan ee Qaranka marka uu Golaha Shacabka ansixiyo Miisaaniyadda Qaranka.
In uu soo saaro tilmaamo ah fulinta nidaam ilaalo (Commitment Control Sysystem), kormeer, diiwaangelin, iyo warbixin ee waajibaadka hay’adaha dowladda.
In uu kormeero, baaro, sidoo kalena haleel u yeesho dhammaan xafiisyada hay’adaha dowladda kuwaasoo lagu hayo maaliyadda dadweynaha, iyo hantida dowladda, lagu maamulo ama ay taalo;
Inuu soo saaro saadaasha lacagaha sanduuqa Khasnadda Mideysan ee Qaranka.
Inuu guddoonsho Guddiga maamulka Khasnadda Mideysan ee Qaranka una warbixiyo Wasiirka
In uu diyaariyo xisaabaadka Khasnadda Mideysan ee Qaran, sidoo kalena uu kulmiyo xisaabaha wadaaga.
Qodobka 11aad: Hanti Dhowrka Guud
Sida ku cad Sharciga Xafiiska Hanti-dhawrka Guud ee Madaxa banana, Sharci Lr. 34 April 14, 1972, ee Xafiiska Hanti-dhawrka Guud ee Madax bannaan ayaa masuul ka ah:
Inuu hubiyo sax ahaanshaha maaliyadda, waxqabadka, deegaanka, iyo nidaamka isgaarsiinta, xaqiijinta tayada, iyo inuu dabagal ku sameeyo dhamaan hay’adaha dowladda, hay’adaha madaxa banana. Mashruucyada iyo shirkadaha dowladda, iyo hay’ad walba oo la siiyo mucaawinooyinka dowladda
Diiwaangelinta dhammaan sharciyada iyo heshiisyada, diiwaangelinta warrants-ka, hantida guurtadda iyo maguurtadda, kala wareejinta miisaaniyadda, deeqaha iyo dhacdo dhaqaale kasto sida ku cad sharcigan;
Baaritaanada dhammaan howlaha la xiriira dakhliga, kharajyada, hantida, dhulalka iyo hantida maguurtada dowladda.
Inuu gutto shaqooyin kale ee ku xusan sharciga Xafiiska Madaxa banana ee Hantidhawrka Guud.
Qodobka 13aad: Qorshaha Siyaasadda Miisaaniyadda
Faqrada 1aad, Wasiirka ayaa masuul ka ah diyaarinta iyo faafinta buuugga nimaadka Siyaasadda Miisaaniyadda Xilliga Dhexe kaasoo daboolaya muddo seddex sano ah, ka bilaabaneysa sanadba sanadka xiga.
Qodobada 14, 15, 16, 17 iyo 18 waxaa lagu cadeeyay Qaab dhismeedka miisaaniyadda, Aaasaaska guud iyo guud marka miisaaniyadda, Dhakhli aan la fileyn, Hannaanka diyaarinta miisaaniyadda iyo Dukumentiyada iyo tusmooyinka soojeedinta miisaaniyadda..
Qodobka 20aad: Helitaanka dadweynaha ee Miisaaniyadda
Miisaaniyadda la ansixiyay waa in ay heli karaan dadweynaha isla marka la ansixiyo.
Qodobka 26aad: Kharaj Dheeri Ah
Haddii ay Hay’ad Dawliga ay bixiyaan Kharajyo xad-dhaaf ah ama ay sameeyaan kharashaad aan qorshaha ku jirin ansixinta kabka miisaaniyadda hore ee Golaha Shacabku bixiyey, Kharajka xad-dhaafka ah ama aan ku jirin miisaaniyadda waa sharci darro waxaana laga goynayaa qoondada hay’adda dowladda Miisaaniyadda Qaranka durba sanad maaliyadeedka xiga kadib isla marka ay oggolaadaan golaha shacabka.
Qodobka 35aad: Amaah
Faqrada 1aad, Golaha Shacabka Fadraalka ayaa dajinaya, xeerka qoondaha, ee jaangoynta amaahda cusub ee gudaha iyo debedda ee Dawladda Fedraalka, iyo ansixinta shuruudaha guud iyo xaaladaha amaahashada ee gudaha iyo dibedda.
Faqrada 2aad, Wasiirka ayaa iskaleh awoodda kaliyah uu ku amaahan karo Gudaha iyo Dibedda asagoo wakiil ka ah Dowladda Fedraalka ayadoo laga eegayo sharuucda guud iyo xaaladaha ee uu ansaxshay Sharciga, ayadoona Hanti-dhawrka guudna diiwaangeshan doono heshiisyada ammaah qaadashada.
Faqrada 5’aad, Maamul goboleed dibadda kama qaadan karo amaah, laakiin waxuu ka amaahan karaa gudaha kadib kolkuu ka helo ogolaansho Wasiirka, ayadoo laga duulayo sharciga maamulka maaliyadda maamul goboleedyada si loo taabageliyo xilliba xilli.